UJuan Tranche. Udliwanondlebe nombhali weSpiculus | Uncwadi lwangoku
UJuan Tranche. Udliwanondlebe nombhali kaSpiculus
Ukufota: UJuan Tranche. Iprofayile ye-Twitter.
UJuan Tranche Ndinexesha lokushicilela ixesha elithile, ndinomdla othile kwaye ndijolise kufundo lwe IRoma ya mandulo kunye nehlabathi lamandulo. Ngoku xa sele enze umtsi kwintengiso kunye nenoveli ebalisa ibali le-gladiator eyindumasi, Iispicules. Ndilixabisile kakhulu ixesha lakho, ukuzinikela kunye nobubele boku udliwano ndlebe apho athetha ngaye kunye nezinye izihloko.
UNCWADI NGOKU: Iispicules yinoveli yakho yokuqala kuhlobo lwembali. Usixelela ntoni ngayo kwaye uvela phi umbono?
Iminyaka Ndiva into engachazekiyo kwilizwe le-gladiator kwaye uSpiculus wayengoyena ubalaseleyo maxesha onke. Ihlala ibambe ingqalelo yam ukuba wonke umntu uve njani malunga nabalwi abashiya ubomi babo ebaleni, kodwa akukho mntu waziyo ukuba bakho ngenene. I-Spartacus, eyona idumileyo kuwo onke amaxesha, wayenzela ukukhokela imvukelo yamakhoboka, ingekuko ukuba ngumlwelwe olungileyo. Kuluntu apho sithanda ukulinganisa impumelelo ngokunikezela amabhaso kunye nokuhombisa phantse yonke into, ubuncinci ndiyifumene inomdla. Ndisebenzise ithuba idatha encinci ukuba sinaye ngaye kunye nothando endinalo ngeli xesha lokuxelela, hayi ibali lakhe kuphela, kodwa nokwazisa eli hlabathi limangalisayo lisuka kwisandla sabahlobo ababini abajongana eRoma yo-Emperor Nero.
Incwadi yokuqala endiyikhumbulayo esikolweni yayi Imbali yasePompeii uxelele abantwana apho umlinganiswa ophambili wayebizwa ngokuba nguSofia. Le ncwadi yandiphawula kuba sikwazile ukuba nentlanganiso nombhali. Ngaphandle kwesibophelelo sokufunda kwinqanaba lemfundo, incwadi yokuqala endizifundele ngokwam Iintsika zomhlaba. Ndithandile. Ukusukela ngoko andizange ndiyeke ukufunda kwaye ndizama ukusasaza ukuthanda kwam kwiintombi zam.
Malunga nokubhala. Ekuphela kwento endiyibhalileyo ebomini bam, ndade ndagqiba kwelokuba ndibalise ibali likaSpiculus thanda iileta ndineminyaka elishumi elinesihlanu ngubani namhlanje ongumfazi wam. Andizange ndibhale ibali, okanye nantoni na enjalo, kodwa ndiyathemba ukuba andizukuyishiya le hobby sele inomdla.
Ngokuqinisekileyo ndingahlala naye Ken follet kuba incwadi zakhe zindenze ndayithanda inoveli yezembali. Kwakhona USantiago Posteguillo kolu hlobo kwaye, ewe, UJuan Eslava Galán, kuba ndiyalithanda ilizwe laseRoma ngenxa yeencwadi zalo. Kwezinye iintlobo endizithandayo, ezinje ngerriller okanye inoveli yolwaphulo-mthetho, ndizithanda kakhulu USantiago Díaz noCarmen Mola.
Sila, ophambili ngokubanzi kwinoveli GladiatorsnguRoger Mouge. Ndisazibuza ukuba lo mntu uzakucinga njani kwiimeko ezahlukeneyo okanye ukuba uza kwenza njani kwiimeko ezahlukeneyo. Ewe ndiyazi ukuba oku kuvakala kuyinto engaqhelekanga. Ndingathanda ukwenza, hayi kakhulu ukwazi, UAlice gould ophambili Imigca kaThixo egosonguTorcuato Luca de Tena.
Kwindlela yokubhala, umculo we izandi zokukhala njengoMax Ritcher, uHans Zimmer kwaye uhlala ehambelana nemeko endiyiphuhlisayo. Kananjalo ayinakuze ilahleke ikofu kunye netshokholethi. Ngokumalunga nokufunda, akukho. Ndiyakwazi ukwenza Uxinzelelo oluphezulu kakhulu Nokuba ungangxola kangakanani na okanye ungxola kangakanani iintombi zam, umabonwakude ndingena kwindawo yeqonga xa ndifunda.
Ukubhala, njengoko benditshilo, ebusuku kunye netafile kwigumbi lokuhlala. Ukuze ufunde Ndiyayithanda isitulo segumbi lentombi yam, isofa kwigumbi lokuhlala, igumbi lokulala, ikhitshi, ithala. Isishwankathelo, andinangxaki indawo kuba ndinomdla wokufunda. Kodwa, ukuba kuye kwafuneka ndihlale nomzuzu othile ndinokukhetha kuwo ehlobo, kwindawo yokuqubha enesandi solwandle ngasemva.
Ndifunde phantse yonke into. Ndiyayithanda inoveli zembali kunye nenoveli mnyama kwaye ndiyidibanisa ne ukuziqhelanisa. Ndicinga ukuba ekuphela kohlobo endingazange ndilufunde yinoveli yothando, kodwa andiyikhuphi nayo.
Okwangoku ndigqibile: Akusekho hlathi lokubuyela kulo, nguCarlos Augusto Casas, endandiyithanda kakhulu. Ndiqale ukufunda: I-alanoNguJose Zoilo Hernández.
Ukubhala, ndiyagqibezela inoveli yam yesibini uthini nge abasetyhini abalwa namabhinqa.
Namhlanje kunikezelo olungaphezulu kunakuqala kwaye, ngethamsanqa, iincwadi zinokuthengwa nangaliphi na ixabiso. Ezi ziindaba ezimnandi kuba zivumela inkcubeko ukuba ibekho kulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali nakulo lonke ukuthanda. Kukwakho namathuba angazange abekho ngaphambili enkosi ukuzipapasha evumele ababhali be-novice, ababone ngaphambili ukuba akunakwenzeka ukufezekisa iphupha labo, ukubanakho ukuhlela imisebenzi yabo. Ndizamile kuba bendingenanto ndiza kuphulukana nayo kwaye yonke into ndizokuyifumana kwaye, ngaphandle kwamathandabuzo, ndenze isigqibo esifanelekileyo ukusukela oko ndabhalayo IispiculesKuyamangalisa indlela endityebise ngayo.
Inyani yile andazi. Iispicules Kuvele nje iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ke, bendisazi lo mzuzu. Ke yonke into endiyithatha kunye nam intle kakhulu. Ukuba okuzayo kulunge, ndijonge phambili kukuphila.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UJuan Tranche. Udliwanondlebe nombhali kaSpiculus
UKen Follet: iincwadi